အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောသတင်းများ No.5 ဆောင်းရာသီ 2018 | အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ
Reward Foundation မှဘလော့ဂ်များ
ပင်မစာမျက်နှာ အမှတ်5ဆောင်းရာသီ 2018
အင်္ဂါနေ့6အပေါ်ပါစိတ်ချရသောအင်တာနက်ကိုနေ့နှင့်အတူth ဖေဖော်ဝါရီလတွင်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့်အလားအလာရှိသောကလေးငယ်များအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ခြေချောင်းအနေဖြင့်အဘယ်ကြောင့်သတိပြုသင့်ကြောင်းအနည်းငယ်သောသတိပေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုဆောင်းရာသီထုတ်ဝေသောသတင်း၌ - ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုသူများအား 'ပေးဆပ်' မည့်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံသစ်၊ အဆိုပြုထားသောကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ 'အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ' အမျိုးအစားအသစ်၊ ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းများမှ၎င်းအားလမ်းလွှဲရန်ကြိုးစားခြင်း၊ အသစ် CPD- ဆောင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများ, အွန်လိုင်းမှမုဒိန်းမှုကိုအခြားနိုင်ငံမှမည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြောင်းသတင်းလွှာ၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့် Valentine's Day အထူးလက္ခဏာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုရွှင်လန်းစေသည်။
နေ့စဉ်နောက်ဆုံးသတင်းများအဘို့, တွစ်တာ @brain_love_sex အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျနာနှင့်ပင်မစာမျက်နှာပေါ်မှာငါတို့အပတ်စဉ်ဘလော့ဂ်များကြည့်ပါ။ ထိတှေ့ mary@rewardfoundation.org သင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းဖုံးလွှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးအတွင်းမည်သည့်ဘာသာရပ်ရှိသည်ဖို့ချင်ပါတယ်လျှင်။
စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပြင်းစား Porn မှ Paid အသုံးပြုသူများ
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က New compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder အမျိုးအစားမိတ်ဆက်ဖို့နောက်နှစ်ဆန်း
porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဝါဒဖွနျ့သွဇာနယူး Diagnosis ရန်ရှာ
"ငါဘာလုပ်သင့်လဲ? ဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများ "ဟု New သုတေသနနှင့်အတူငယ်ရွယ်အမျိုးသမီးများနေ့အစီရင်ခံစာအကြပ်အတည်း
အထူးနှစ်သစ်ကူးဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် NoFap အဖွဲ့ထံမှအကူအညီ
Valentine's Day ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နည်း
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းပေါင်၏စုံတွဲတစ်တွဲကုန်ကျရန်အသုံးပြုများနှင့်လက်လှမ်းမီဖို့ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါကစမတ်ဖုန်းနဲ့အခြားအင်တာနက်ကိရိယာများပေါ်တွင်အခမဲ့နှင့်ကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါသတင်းကိုယခုအပတ် crypto-ငွေကြေးဆိုသော်ငြားထို Multi-ဒေါ်လာဘီလီယံ porn စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ကစားသမား, အမာခံ porn စောင့်ကြည့်ဖို့အမှန်တကယ် '' လစာ '' လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဂိမ်းကိုတိုးမြှင့်ပေးအပ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤတွင်အားဖြင့် run ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည် အဆိုပါတနင်္ဂနွေ Times သတင်းစာ ကျနော်တို့ကိုးကားခဲ့ကြရသော (4 ဖေဖော်ဝါရီ 2018) ။ စာနယ်ဇင်းသမားသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမှန်ကန်သော 'အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများ' အားစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဟုသတ်မှတ်ခြင်းကိုမှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း၎င်းကို "အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုဆန့်ကျင်ခြင်း" အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အဓိကအချက် - အလွန်အမင်းကြွယ်ဝသောညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ငွေများများပြားလာသော်လည်း NHS အတွက်စွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောကျန်းမာရေးပြproblemsနာများ၊ အလွန်အကျွံတင်ဆောင်လာသောရာဇ ၀ တ်မှုတရားစီရင်ရေးစနစ်အတွက်လိင်ရာဇ ၀ တ်မှုများနှင့်အရေးအကြီးဆုံးကိစ္စရပ်များနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံလိုခြင်း ခြုံငုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနိမ့်။
ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောဂါများဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (ICD-11) ကုဒ်ဆိုင်ရာလက်စွဲစာအုပ်ကို WHO မှထုတ်ပြန်လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များကရောဂါအမျိုးမျိုးကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ စိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုများ၏ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (လက်ရှိ DSM 5, 2013) သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အဓိကအသုံးပြုသော်လည်းအလားတူဖြစ်သည်။ ရောဂါအသစ်နယ်ပယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနများတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှစာရင်းအသစ်များပေါ်လာသည်။ ထိုရည်ရွယ်ချက်အရအင်တာနက်သည်အပြုအမူနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ICD-11 သည်“ အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ” အပါအ ၀ င်အမျိုးအစားအသစ်အမျိုးအစားများကိုစတင်မိတ်ဆက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
တစ်ဦးစာတစ်စောင် ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု (Vol 17: 1 ဖေဖော်ဝါရီ 2018) ကိုသစ်ကိုကို manual ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက် key ကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အသုံးပြုပုံကြောင့်ဒီရောဂါမှာရောကျပွီဘယ်လောက်ထွက်သတ်မှတ်။ ဒီနေရာတွင်တစ်ခုကောက်နုတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်:
"ဒီပုံစံကိုအောက်ပါများထဲမှသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၌ထင်ရှားနေသည်: တစ်) ထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ကျန်းမာရေးနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစောင့်ရှောက်မှုသို့မဟုတ်အခြားအကျိုးစီးပွား, လှုပ်ရှားမှုများနှင့်တာဝန်များလျစ်လျူရှုထား၏အချက်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ဘဝများ၏ဗဟိုအာရုံဖြစ်လာပြီ ခ) လူတဦးကိုထိန်းချုပ်ရန်သို့မဟုတ်သိသိသာသာထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလျှော့ချရန်မြောက်မြားစွာမအောင်မြင်အားထုတ်မှုကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ ဂ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ (ဥပမာထပ်ခါတလဲလဲကြားဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်, လုပ်ငန်းခွင်အကျိုးဆက်များ, ကျန်းမာရေးအပေါ်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှု) ကြားမှထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆက်လက်; သို့မဟုတ်ဃ) လူတစ်ယောက်သူ / သူမကနေနည်းနည်းသို့မဟုတ်လုံးဝမစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိချိန်တွင်ပင်ထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ရောက်နေပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို overpathologizing စိုးရိမ်အတိအလင်းအဆိုပါရောဂါအတှကျအအဆိုပြုထားသည့်ရောဂါရှာဖွေလမ်းညွှန်ချက်များအတွက်ဖြေရှင်းနေကြသည်။ လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်သိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းကျော်ချို့ယွင်းထိန်းချုပ်မှုပြကြဘူးတဲ့သူ (များကြောင့်မြင့်မားလိင် drive ကိုမှဥပမာ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားနှင့်အပြုအမူများမြင့်မားနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါရောဂါမဖြစ်သင့်။ အဆိုပါရောဂါကိုလည်းဤအမှုသည်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ပင်အခါ, မြီးကောင်ပေါက်အကြားဘုံဖြစ်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားနှင့်အပြုအမူများမြင့်မား (ဥပမာ, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ) ကိုဖော်ပြရန်ဖို့တာဝန်မပေးသင့်ပါဘူး။
အဆိုပြုထားအဖြေရှာတဲ့လမ်းညွှန်ချက်များလည်းအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါမဟုတ်ရင် psychopathology ၏ညွှန်ပြစဉ်းစားမရမယ်လို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulses သတင်းပို့, တိုကျတှနျးထားသို့မဟုတ်အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. ကိုယ်ကျင့်တရားစီရငျခကျြသို့မဟုတ်မရရှိခြင်း၏နှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲအပေါ်အခြေခံပြီးရောဂါမဖြစ်သင့်ကြောင်းအလေးအနက်။ egodystonic ဖြစ်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲစေနိုင်ပါတယ်; သို့သော်သူ့ဟာသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ၏ရောဂါခိုင်လုံမထားဘူး။ "
အဆိုပါ Multi-ဒေါ်လာဘီလီယံ porn စက်မှုလုပ်ငန်းက၎င်း၏အမြတ်ငွေကာကွယ်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု compulsive ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုမဆိုစိတ်ကူးအမှိုက်မှစိတ်အားထက်သန်သည်။ အဆိုပါ Weinstein / Spacey, #MeToo ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းနှင့် ICD-11 အဆိုပြုချက်သည်၌ဤဆောင်းပါး၏ပါတီအားအတွက် Daily Mail က လိင်စွဲလမ်းနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲနေတဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါဖြစ်နိုင်သည်ကိုတည်ထောင်ရန်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။
သို့သော်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောဂါများဆိုင်ရာအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (ICD-11) မှအဆိုပြုထားသောထုတ်ဝေမှုအသစ်တွင်ပါ ၀ င်သောရောဂါရှာဖွေမှုအသစ်ဖြစ်သော“ မလိင်အင်္ဂါအမူအကျင့်ဆိုင်ရာရောဂါပြdisနာ” ကိုတိုက်ဖျက်နေသောအမျိုးသမီးအုပ်စုများမှာဝမ်းနည်းစွာလွဲမှားစွာလွဲမှားနေကြသည်။ သူတို့ကြောက်စရာမလိုဘူး။ ဤအဆိုပြုထားသောရောဂါသည် "Weinsteins ကိုချိတ်ထားခြင်းမှလွှတ်လိမ့်မည်" မဟုတ်ပါ ဤသည်မှာအဆိုပြုထားသောရောဂါခုခံမှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်ကြိုးစားသည့်ညစ်ညမ်းသောမီဒီယာစက်မှလှုံ့ဆော်ပေးသောစကားပြောသောအချက်ဖြစ်သည်။
ဒီ ICD-11 ရောဂါသည်စွဲစွဲလမ်းသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ၊ အထူးသဖြင့်လူငယ်များကိုသူတို့မှာတကယ့်ပြproblemနာရှိပြီးကုသမှုခံယူဖို့ခွင့်ပြုပေးလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ပညာရှင်များကိုပိုမိုသုတေသနပြုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ “ ဒီရောဂါဟာရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲထဲမှာမရှိဘူး” လို့သုတေသနအချို့ကိုပိတ်ဆို့ထားပါတယ် တောင်မှစိတ်ပညာယနေ့တွင်US ရှိစိတ်ပညာမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်ဘလော့ဂါများအား၎င်းအကြောင်းရေးသားရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊
ရောဂါကိုဆန့်ကျင်သောဤဆန္ဒပြမှုများသည်နေရာလွဲနေသည်။ ဒါကိုလူတွေကိုပညာပေးရမယ်။ ဒီရောဂါလက္ခဏာပြလိမ့်မည် "အသားစားဆင်ခြေဆင်လက်။ " စွဲအားလုံးသည်၎င်းတို့၏လုပ်ရပ်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်စွဲလမ်းမှုနှင့်မဆိုရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုမူးယစ်စေသည့် 'မူးယစ်ခြင်း' သည်ကာကွယ်မှုမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်သားကောင်ရေအမြောက်အများသည်စွဲလမ်းသူများပင်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သီးခြားဖြစ်ရပ်နှစ်ခုကိုတမင်တကာရှုပ်ထွေးစေခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဘလော့ဂ်အပိုင်းအစ ကျနော်တို့ကပြဿနာအပေါ်ကိုပြု၏။
သူတို့ကိုအနာဂတျမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်လျှော့ချများအတွက် EHRC သူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာကိုပို့ဘို့အတန်းတူရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် FTSE100 ကုမ္ပဏီများနှင့်အခြားအကြီးမားအဖွဲ့အစည်းများမှဖုန်းခေါ်ပြီ။ အဆိုပါ TRF ကမ်းလှမ်းမှုမှကော်ပိုရေးရှင်းအဖွဲ့အစည်းများဆက်သွယ်ခဲ့ကြ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်လေ့ကျင့်ရေး ဒီအလငျး၌။
လူခဲ့သည် ဆွီဒင်အတွက်ပြစ်မှုထင်ရှား အင်တာနက်ပေါ်တွင်ကလေးများအားမုဒိန်းကျင့်ခြင်း၊ ၎င်းသည် 'online predator' ၏အယူအဆအသစ်တစ်ခုနှင့် 'stranger အန္တရာယ်' အတွက်နောက်ထပ်ရှုထောင့်တစ်ခုသို့ထပ်ထည့်သည်။ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲကြောင့်သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာလျော့နည်းသွားတာနဲ့အမျှအမျိုးသားတွေကများပြားလာပြီးဝယ်လိုအားရှိတဲ့ကလေးငယ်များရဲ့တိုက်ရိုက်မုဒိမ်းမှုလိုတရားမ ၀ င်ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရှာဖွေလာကြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တရားရုံးများကမည်သို့တုံ့ပြန်ကြမည်နည်း။ ဒီလမ်းကြောင်းသစ်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ လူတွေကို hardcore porn ကြည့်ဖို့ငွေပေးတာကမလွယ်ပါဘူး။ အပေါ်ကပထမဆုံး item ကိုကြည့်ပါ။
sexting အထူးသဖြင့် 12-15 အသက်အပိုင်းအခြားထဲမှာရောနှောပုဂ္ဂလိကနှင့်ပြည်နယ်ကျောင်းများတွင်ထူပြောနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကနျြးမာရေးနဲ့ပတျသကျတဲ့ကျောင်းတွေအတွက်အတန်းကို run တဲ့အခါမှာကျနော်တို့မှန်မှန်, sexting ၏လူမှုရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာသက်ရောက်မှုဒီပြောသည်ခဲ့ကြရတယ်။ လူငယ်များကဤဖြစ်စဉ်ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုပေါ်အိမ်နှင့်ကျောင်းတွင်တတ်နိုင်သမျှပံ့ပိုးကူညီမှုလိုအပ်ပါတယ်။ ဤတွင်အချို့ဖြစ်ပါတယ် အသစ်သောသုတေသန အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးတွေဆီသို့ဦးတည်ပါဝင် coercive အချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး။
"ကိုယ်လုံးတီးနှင့် Semi-ဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများ Sexting နှင့်ပေးပို့ခြင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှငျ့ပတျသကျသောဟောပြောချက်၏ရှေ့တန်းမှမှာဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သုတေသီများ sexting များအတွက်အကျိုးဆက်များစူးစမ်းကြစဉ်တွင်, လျော့နည်းဓာတ်ပုံတွေပို့ခြင်းအကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချတဲ့အခါမှာမြီးကောင်ပေါက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအကြောင်းကိုလူသိများသည်။ မြီးကောင်ပေါက်နေဖြင့် posted အွန်လိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ကိုသုံးပြီး, ဒီလေ့လာမှုအမျိုးသမီးငယ်စူးစမ်းရဲ့သူတို့၏ရွယ်တူချင်းရန်ဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများပေးပို့ခြင်းနှင့်အတူပြဿနာများကဖော်ပြခဲ့သည်။ 462 ပုံပြင်များ၏တစ်ဦးကအကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအမျိုးသမီးငယ်ပေးပို့နှင့်ဓာတ်ပုံများကိုမပို့မှရှောင်ကြဉ်ရန်သူတို့ကိုနှစ်ဦးစလုံးကိုပြောသည်ရာပဍိပက္ခမက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဆက်ဆံရေးရရှိမှု၏မြော်လင့်ခြင်းအတွက်ဓာတ်ပုံတွေပို့ခြင်းအပြင်, အမျိုးသမီးငယ်သည်လည်းမြဲတောင်းဆိုမှုများ, အမျက်ဒေါသနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများ၏ပုံစံအတွက်အထီး counterparts တွေကိုအားဖြင့်အကျပ်ကိုင်၏ရလဒ်အဖြစ်ဓာတ်ပုံတွေပို့ခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးငယ်လူပျိုတို့ရဲ့ coercive အပြုအမူတွေသွားလာရန်ကြိုးစားခဲ့သေးမကြာခဏလိုက်နာမှုမှရောကျလာ။ ငြင်းဆန်မကြာခဏအထပ်ထပ် requests သို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ခဲ့သည်။ အခြားရွေးချယ်စရာနည်းပရိယာယ်အမျိုးသမီးငယ်ကိုအောင်မြင်စွာသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေသွားလာရန် tools များရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းညွှန်ပြလူငယ်အမျိုးသမီးရဲ့ပုံပြင်များထဲကနေအကြီးအကျယ်ပျက်ကွက်ကြတယ်။ "
ကျနော်တို့လိင်စွဲလမ်းနှင့်စနေနေ့ 27 ဇန်နဝါရီလအပေါ်လန်ဒန်မြို့ရှိ compulsive (ATSAC) ညီလာခံ၏ကုသမှုများအတွက်အသင်းမှတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကနှင့်ကုသမှုရွေးချယ်စရာအဘို့ကြီးစွာသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အလိုဆန္ဒရှိကွောငျး, အဓိကအားဖြင့်လိင်ကုသနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာတိုင်ပင်မှူးမတ်, သင်တန်းသားများအနေဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
TRF ကြောင့်လိုအပ်မှပံ့ပိုးခြင်းနှင့်ဗြိတိန်မှာ "စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ကာယကျန်းမာရေးအပေါ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု" ပေါ်တွင်ပထမဦးဆုံး-အစဉ်အဆက်, RCGP-အသိအမှတ်ပြုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပေးခံရဖို့ကျေနပ်သည်။ အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမေလပေါ်တွင်နေရာတစ်နေရာယူပါလိမ့်မယ်: Edinburgh အတွက်9မေလ; လန်ဒန်မြို့ရှိ 14 မေလတွင်: ဘာမင်ဂမ်အတွက်မန်ချက်စတာမှာ 16 မေလနှင့် 18 မေလတွင်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကအမျိုးမျိုးနှင့်ထိုက်တန်7CPD အမှတ်ပညာရှင်များမှပွင့်လင်းကြသည်။ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ပြန့်နှံ့ ကျေးဇူးပြု.။ အသေးစိတ်ကိုနှင့်သွားလာရင်းတက်လက်မှတ်ထိုးရန် www.rewardfoundation.org.
အမှု၌သင်တို့ကိုဤအရပ်၌ကား, NoFap အဖွဲ့ကစုဝေးဤ blog အပိုင်းအစနေကြသည်လွဲချော် porn ဖြတ်ဘို့ 50 အကြောင်းရင်းများ.
ကျနော်တို့3ကျောင်းများအတွက်ဒီဇင်ဘာလသင်ကြားရေးအတွက်အလုပ်ရှုပ်အချိန်ကုန်ခဲ့ Fettes ကောလိပ်, ဂျော့ခ်ျ Watson ရဲ့ကောလိပ်နှင့်စိန့် Columba ရဲ့, Kilmacolm ။ အဆိုပါကျောင်းသားစကားပြောနှင့်၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးအပေါ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုနှင့်ဒုစရိုက်သည်၎င်း၏အလားအလာတွေအကြောင်းသင်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခြင်းကိုချစ်။ မိန်းကလေးများယေဘုယျအားဖြင့်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းပိုမိုသိလိုသည်ယောက်ျားလေးများစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုလှည့်ပတ်ရရန်အကြောင်းကိုသိလို။
ဆဌမနှစ်တွင်ကျောင်းသားသူတို့ရဲ့အချိန်နှင့်အလုပ်၏လျော့နည်းကြီးကြပ်မှုလည်းမရှိရှိရာကောလိပ်မှအကူးအပြောင်းသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်တွေအကြောင်းနားမထောင်ဖို့, အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားနေကြသည်။ အဆိုပါသုတေသနသောသူတို့သည်လိမ္မာပါးနပ်ဖြစ်ကြရင်တောင်သူတို့ရဲ့အွန်လိုင်းအလေ့အထများကိုထိန်းချုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဆင်းရဲသောသူသည်စာမေးပွဲဖြေဆိုရလဒ်များကိုမှဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျော့ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောဆက်ဆံရေးကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းလျှော့ချကြောင်းပြသထားတယ်။
၂၄ နာရီ Digital Detox လေ့ကျင့်ခန်းတွင်ပါ ၀ င်သူများစွာသည်၎င်းသည်ရုန်းကန်နေရသည်။ အခြားသူများက၎င်းကိုလုပ်နိုင်သူများကိုအံ့အားသင့်စေကြသည် - ကျောင်းသားအများစုသည်နာရီအနည်းငယ်သာစီမံခန့်ခွဲခြင်းသို့မဟုတ်ကြိုးစားမှုကိုလုံး ၀ စိတ်မဝင်စားခြင်း။
ဆရာကိုဖုန်းအသုံးပြုမှုနှင့်၎င်းတို့၏ကျောင်းသားမှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်အိပ်စက်ခြင်း၏ပျှမ်းမျှသောငွေပမာဏနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုထံမှစစ်တမ်းရလဒ်များမှာအံ့သြခဲ့ကြသည်။ အတော်များများကကျောင်းသားသူတို့အလုံအလောက်အိပ်ပျော်ခြင်းလာပြီကြောင့်နောက်နေ့ကျောင်းမှာ "ကြိုးနဲ့ပင်ပန်း" feeling သူတို့ကိုထွက်ခွာကြောင်းအထူးသဖြင့်ညဥ့်အခါအင်တာနက်နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းကြသည်မဟုတ်ဟုဆိုသည်။
ဤတွင်ကျောင်းသား '' မှတ်ချက်အချို့ကိုနေသောခေါင်းစဉ်:
“ ဒါကစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ N5 မှာကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အဆင့်မြင့်သူတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်”
“ Snapchat သည် 'Streaks' ကိုစိတ်စွဲလမ်းလာသည်။ လူများက၎င်းတို့အားမည်သည့်အရာထက်မဆိုပိုမိုဂရုစိုက်သည်။ ဒါဟာမလိုအပ်ပါဘူး။
ငါဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသိပ်မသုံးဘူး၊ ငါက xbox အရမ်းများတယ်။
"ကျွန်မရဲ့မိဘများငါ့ကိုအတူအိပ်ရာငါ့ဖုန်းကိုတက်ယူခွင့်ပြုဘယ်တော့မှအတွက်မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရာ၌ခန့်ထားပြီဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဒါဟာငါအပြာရောင်အလင်းတွေနဲ့အဆိပ်သင့်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လွယ်ကူစွာအိပ်မရတော့မှငါကိုဆိုလိုသည်။ ငါသို့သော်နေဆဲငါ '' ဘာမှ '' ရှိသည့်အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စဉ်မှာကျွန်ုပ်၏ဖုန်းတက်ကောက်နေကိုရှာဖွေကြဘူး။ ဒါဟာဒစ်ဂျစ်တယ် detox ၏သက်ရောက်မှုကိုမြင်ရဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ "
“ နောက်ဆုံးမှာတစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုဖုန်းမှထုတ်ဖို့ပြောနေတာကိုငါတကယ်ဂုဏ်ယူတယ်။ ကိုယ့်ဖုန်းကိုတောင်မကြိုက်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ဖိအားအောက်မှာအမြဲတမ်းရှိနေဖို့ပဲ။ ဖုန်းတွေပေါ်မှာမ ၀ င်ဘဲသူငယ်ချင်းဖြစ်ချင်တာပဲ”
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်ကြည့်ရှုလော့ ကျောင်းများအစီအစဉ်ကို.
ကိုယ့်အားလုံးငါတို့စာဖတ်သူတွေရန်သတိပေးမှုအဖြစ်တစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်မအတွက်အချို့လည်းမရှိ မေတ္တာ၌ကျသွားမှသိပ္ပံ။ မင်္ဂလာ Valentine Day ကို 14 လာth ဖေဖော်ဝါရီလ။
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website www.rewardfoundation.org မှာရွေးချယ်ကြောင့်ဤအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိထားပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏မေးလ်လိပ်စာဖြစ်ပါသည်: